FAQs - Dongguan Guta Mucheche Furniture Co, Ltd.
Vana masofa chair
Yakazara furo zvigaro
Bhora chimiro Sofa
Kuchengetedza bhokisi uye zvigaro
Sectional pasofa Sets
Pet Sofa Mabhedha
Simbi Pet mibhedha
For ivhu, kutungamirira nguva anenge mazuva manomwe. For vakawanda kugadzirwa, kutungamirira nguva mazuva 20-30 mushure mekugamuchira dhipoziti muripo. Nguva dzekutungamira dzinoshanda kana (1) tagamuchira dhipoziti yako, uye (2) tine mvumo yako yekupedzisira yezvigadzirwa zvako. Kana yedu yekutungamira nguva isingashande neyako nguva yekupedzisira, ndapota enda pamusoro pezvaunoda nekutengesa kwako. Muzviitiko zvese isu tichaedza kugadzirisa zvaunoda. Kazhinji tinokwanisa kuzviita.
Isu garandi zvinhu zvedu uye nekushanda. Kuzvipira kwedu kune kwako kugutsikana nezvigadzirwa zvedu. Muwarandi kana kwete, itsika yekambani yedu kugadzirisa nekugadzirisa nyaya dzese dzevatengi kugutsikana kwemunhu wese
Kwete. 3, Dangkeng Road, Shangtun No.3 Maindasitiri Nzvimbo, Liaobu Town, Dongguan, China.